अपडेटः कार दुर्घटनामा एकै परिवारका तीनको मृत्यु, दुई घाइते - नेपालबहस
१२ अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार स्वीकृति
अब महानगरपालिकाबाटै पच्चिस श्ययासम्मका अस्पतालको अनुमति
अपडेटः कार दुर्घटनामा एकै परिवारका तीनको मृत्यु, दुई घाइते
२० कार्तिक, काठमाडौं । सन्धिखर्कको नरपानीमा बिहान भएको कार दुर्घटनामा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुई जना घाइते भएका छन् । गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडकखण्डको नरपानीमा आज बिहान बा १७ च ६९१७ नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा एकै घरका तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए ।
कार रुपन्देहीको सैनामैनाबाट सन्धिखर्क आउँदै थियो । मृत्यु हुने र घाइते हुने सबै एकै परिवारका रहेका छन् । घटनामा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–२ मुर्गियाकी ८० वर्षीया दुर्गादेवी खड्का, उनका छोरा ४३ वर्षीय भक्तबहादुर र अर्का छोरा ३९ वर्षीय तिलबहादुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
घाइते हुनेमा चालक ४९ वर्षीय गङ्गाबहादुर खड्का र निजका जेठो दाजुका छोरा २५ वर्षीय विनोद रहेका छन् । घाइतेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठाडामा उपचारपछि थप उपचारका लागि बुटवल पठाइएको छ । कार सडकबाट करीब १५० मिटर तल खसेको छ । ओरालो बाटोमा तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय अर्घाखाँचीले बताएको छ ।
Previous articleघट्दो बजारमा पनि बैंकको शेयर उच्च कारोबार
Next article‘गो ब्याक इन्डिया ! कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो’
११ लाखको सडक खन्दा ४९ लाखको सिँचाई आयोजना क्षतविक्षत !
१० लाख पाएपछि परिवारले बुझे राजकुमारको शव
लकडाउनका कारण अहिलेसम्म कृषकले पाएनन् युरियामल
शिक्षा / स्वास्थ्य2213